Ambassador Francisco Madeira ayaa cambeereeyay weerarkii lagu qaaday Hotel Ambassador – STAR FM SOMALIA
Ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira ayaa cambeereeyay weerarkii lagu qaaday Hotel Ambassador kaas oo ay ku geeriyoodeen ugu yeraan 10 ruux oo ay ku jiraan labo xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Ambassador Francisco Madeira oo ah wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in weerarada lala beegsanayo xarumaha dowladda, siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ah waxaa ay muujinaysaa sida Al-shabaab aan wax qiimo ah aan ugu heyn ilaalinta nafta dadka isla markaana falalka ay sameeyaan ay yihiin kuwo fuleynimo ah.
“ Dadka Sooomaaliyeed waxaa ay doorteen wadada nabadda si ay u gaaraan dhismaha qaran xasiloon oo barwaaqo ah waqtiga hadda la joogo iyo dhismaha jiilasha soo socoda mana joojineyso ahmigaas falalka fuleynimada ah oo ay wadaan argagaxisada ,” ayuu yiri Ambassador Madeira.
Waxaa uu tacsi u direy qoysaskii dadka geeriyooday isagoo kuwo dhaawacmay u rajeeyay caafimaad deg deg ah . waxaana uu sidoo kale sheegay in AMISOM ay ka go’an tahay in si dhow ula sahqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed iyo beesha
Wasiirka Amniga iyo Taliyaha Nabad Suggida oo ka hadlay weerarka Hotel Ambassador(Daawo Sawirada)